Muuse oo Xaalad Deg Deg ah ku Soo Rogay Saddex Degmo [DAAWO] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Muuse oo Xaalad Deg Deg ah ku Soo Rogay Saddex Degmo [DAAWO]
Muuse oo Xaalad Deg Deg ah ku Soo Rogay Saddex Degmo [DAAWO]
April 30, 2019 - By: Keyse Aadan
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xaalad deg deg ah ku soo rogay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag, kuwsoo kala aha Ceerigaabo, Ceel Afweyn iyo Gar-adag muddo saddex bilood ah.
Xaalad deg-deg ah ee uu soo rogay ayuu ku sababeeyay marku arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyinkaasi taasi oo uu sheegay in ay halis galin karot nabad-gelyada guud, jiritaanka Somaliland.
Go’aanka madaxweynuhu wuxuu Ciidammada Somaliland ee kala duwan uu awood u siinayaa in ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga, kagana hor-tagayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata in ay fulinayso falal nabad-gelyo darro. Sidoo kalena ay la wareegaan maamulka degaamadaasi.
Xaalada deg deg ah ee Muuse biixi uu soo rogay ayaa imaanaysa iyadoo shalay degaanka Yagoori ee Sool lagu dilay Gashaanle Cabdilaahi Axmed Tallan, Taliyihii Xabsiga degmada Gar-adag ee Ciidanka Asluubta iyo Laba Xidigle Nuur Aw Cali Nuux, Taliye ku xigeenkii Saldhiga Booliska ee Degmada Gar-adag ee gobolka Sanaag.
Halkan ka akhriso Xeerka Xaalada deg deg ah.